Discovery Channel amin'ny Android | Androidsis
Fanavaozana: Ho an'ireo izay manana olana amin'ny fametrahana azy, andramo alaina eto ny marketenabler ary apetaho amin'ny telefaona. Amin'ity fampiharana ity dia azo atao ny mahita ny fampiharana ny tsena any amin'ny firenen-kafa. Vantany vao napetrakao izy dia tanteraho ary kitiho ny tabilao mpanelanelana, ao amin'ilay lisitra miseho, safidio izahay T-Mobile ary akatony ilay fampiharana. Ankehitriny rehefa ny fampiharana ny Android Market afaka mikaroka ianao Discovery Channel ary hiseho ho alaina izy io. Ampidiriko koa ny kaody QR.
Discovery Channel dia nandefa fampiharana maimaimpoana ho an'ny Fitaovana AndroidAmin'ny alàlan'ity rindranasa ity dia azonao atao ny miditra amina tahiry sarimihetsika misy ny programa misy azy ireo toy ny Myth Hunters. Ho fanampin'ireo horonantsary amin'ilay andian-dahatsoratra Discovery malaza indrindra, ianao koa dia ho afaka hiditra amin'ny fanangonana galeriana an-tsary, fandaharana, fangatahana fanontaniana, horonan-tsary Discovery News, ary koa afaka mitady sy mividy sarimihetsika sy vokatra avy amin'ilay fantsona.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny lazan'ny Fitaovana Android"Faly izahay fa mitondra sehatra vaovao manaitaitra ireo mpijery izay ahafahan'izy ireo mankafy atiny avo lenta ary mahafaly ny fangatahan'izy ireo avy hatrany", hoy i Todd Zandler, filoha lefitra, Digital Media Distribution.
Manana ny fampiharana eto ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Discovery Channel amin'ny Android-nao
tanterahina dia hoy izy:
Heveriko fa ho an'ny 2.0 izany, sa tsy izany? Ao amin'ny majika 1.6 tsy azoko apetraka 🙁
Valiny amin'i AEjecutable
tany-ny-mordor dia hoy izy:
Ao amin'ny Dream 1.6 Cyanogen 4.2.13 dia tsy avela hametraka koa.
Efa nanandrana nampidina azy tamin'ny tsena ve ianao? Mila manana ny mpampita ny tsena ianao hahita azy. Namela rohy amin'ity rindrambaiko ity sy ny kaody QR aho
Jose C dia hoy izy:
Amin'ny maziko 1.5 ... tsy mamela ahy hametraka azy io koa aho.
Tsy fahombiazana [INSTALL_PARSE_FAILED_NO_CERTIFICATE]
Valiny tamin'i Jose C
pintocars dia hoy izy:
Mbola tsy azoko atao ny miasa amin'ny finday iray.
Valiny amin'ny pintocoches
Oppo dia handefa mpamaky sy telefaona iray, miaraka amin'ny Android